drugs - Synonyms of drugs | Antonyms of drugs | Definition of drugs | Example of drugs | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for drugs
Top 30 analogous words or synonyms for drugs
ဆေးဝါးဗေဒ 281. Isoniazid (INH) = တီဘီဆေး၊ အခြားဆေးနှင့်တွဲပေးရသည်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = အန်-ပျို့၊ အလာဂျီရ၊ မျက်စိအားနည်း၊ အသံထိခိုက်၊ သွေးထိခိုက်၊ Fixed-dose Combinations of Drugs for TB by WHO = တီဘီ ကုသရန် ဆေးအတွဲများ၊
အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါ ဘီပိုး မည်သို့ပင်ကူးစက်ခံရပါမူ နာတာရှည် ဘီပိုးရှိသူ ဖြစ်ပါက၊ အင်တာဖယ်ရွန် interferon နှင့် အန်တီဗိုက်ရယ် ဆေးများ antiviral drugs အသုံးပြုကာ တက်ကျွမ်းသော ဆရာဝန်များနှင့် သေသေခြာခြာ တိုင်ပင်မှုရယူ၍ ကုသပေးနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကုသနိုင်ရန် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဆေး ၇ မျိုးရှိသည်။
လူကုန်ကူးခြင်း UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး) ၏အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များကို အများဆုံးပို့ခြင်းခံရသည့် ဘုံခရီး လမ်းဆုံးနိုင်ငံများမှာ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ အစ္စရေး၊ ဘယ်(လ်)ဂျီယန်၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ တူရဂီနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ဖြစ်ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဆေးဝါးဗေဒ 117. Cephalexin, Cephradine, and Cefadroxil (First-Generation Cephalosporins) (0.5 g) 30 mg/kg; Oral drugs are used for treatment of urinary tract infections, and they can be used for minor skin and soft tissue infections (eg, cellulitis, soft tissue abscess); Intravenous first-generation cephalosporins are the drugs of choice for most clean surgical prophylaxis; ပဋိဇီဝဆေး၊ အသက်ရှူလမ်း-အရိုး-အဆစ်-သွား-ရက်တို ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ မွေးလမ်း-ကျား-ဆီးကြိတ်-ဝမ်းတွင်းမြှေး-ဦးနှောက်မြှေး-တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများ-သည်းခြေလမ်း-နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း-နှလုံးအတွင်းသားရောင်၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ သွေးထဲပိုးရောက်၊ အဆုပ်ပြည်တည်၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ၊ အသဲ-နှလုံး အစားထိုးခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊ အရေပြားရောင်၊ နို့နာ၊ 250-500 mg QID Orally x 1-3 days
ဆေး စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသောဆေးများ (psychoactive drugs) သည် ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေကာ အသိအမြင်များ၊ စိတ်ခံစားမှုများကို ပြောင်းလဲစေတတ်သည်။ ယင်းတို့တွင် စိတ်ကျဆေး အရက်နှင့် စိတ်ကြွစေတတ်သော နီကိုတင်းနှင့် ကေဖိန်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤသုံးမျိုးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲနေကြပြီး ယင်းတို့ကို အပန်းဖြေစရာ ဆေးများအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ အခြားသော အပန်းဖြေဆေးများတွင် စိတ်ချောက်ချားဆေးများ (hallucinogen)၊ ဘိန်းပါသော ဆေးများ (opiates) နှင့် အမ်ဖတမင်း (amphetamine) တို့ဖြစ်သည်။ အချို့ဆေးများမှာ ဆေးစွဲခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပြီး ထိုဆေးအားလုံးတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိကြသည်။
ဆေးဝါးဗေဒ h. Sulfonamides are the drugs of choice for Nocardia infections. Trimethoprim-sulfamethoxazole is widely distributed in tissues, penetrates into the cerebrospinal fluid, and has been used to treat meningitis caused by gram-negative rods, though third-generation cephalosporins are now preferred. While it is occasionally used for outpatient respiratory tract infections, the increasing pattern of resistance associated with S pneumoniae has decreased its utility.
ဆီးချိုရောဂါ ဆီးချိုအမျိုးအစား-၂ကို ရှေးဦးစွာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း ကစီဓာတ်- ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် Carbohydrate ဓာတ် စားသုံးမှု လျှော့ချခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း များဖြင့် ကုသသည်။ ၎င်းတို့က အင်ဆူလင်တိုးမှု (တနည်း- အင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်း Insulin Resistanceအားလျော့နည်းစေခြင်း )ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ တခါတရံ၌ ဤသို့ထိန်းသိမ်းရုံမျှနှင့် ကျေနပ်ဖွယ် သွေးအတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ရရှိကောင်း ရရှိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်း ဖြစ်နိုင်စွမ်း(Risk) မှာ လျော့ကျမသွား။ ထို့ကြောင့် အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ခြင်း များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုသည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာမူ (လိုအပ်ပါက) ဆီးချိုသောက်ဆေးများ (Oral Hypoglycemic Drugs) ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး (; ; အတိုကောက် UNDOC) သည် ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး အစီအစဉ် (United Nations International Drug Control Program (UNDCP)) နှင့် မှုခင်းကာကွယ်ရေးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုဌာန တို့ကို ပူးပေါင်းပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် မှုခင်းကာကွယ်ရေးရုံး အနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ United Nations Office on Drugs and Crime အဖြစ် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဆီးချိုရောဂါ မည်သည့် ဆီးချိုအမျိုးအစားကိုမဆို ဝေဒနာ မခံစားရအောင် ထိန်းချုပ်ကုသ နိုင်သည်။ ၁၉၂၁ တွင် အင်ဆူလင် ပေါ်လာကတည်းက ကြပ်မတ်စွာ ကုသနေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်သေးပေ။ ဆီးချိုအမျိုးအစား -၁ တွင် အင်ဆူလင် ထိုးခြင်း၊ အင်ဆူလင်ပမ့် (pump) နဲ့ကုသခြင်း စသည့် ကုထုံးများဖြင့် ရောဂါ ဝေဒနာတွေ မခံစားရဘဲ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေကို အများနည်းတူ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းကုသနိုင် ပါသည်။ အမျိုးအစား၂ တွင်မူ အစားအသောက် ထိန်းသိမ်းမှုပိုင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း အပိုင်းများနှင့် သောက်ဆေးဖြင့် ကုသခြင်း (Oral hypoglycaemic drugs) အပိုင်း၊ အင်ဆူလင် ဖြင့်ကုသခြင်း အပိုင်းများနဲ့ ထိန်းချုပ် ကုသနိုင်ပါသည်။